Kanaadaan deeggarsa doolara Miliyoona 9.5 ol muslimoota Rohingiyaatiif arjoomte. | NuuralHudaa
Categories: Eeshiyaa Kaanaadaa Odeeyfannoo
Kanaadaan deeggarsa doolara Miliyoona 9.5 ol muslimoota Rohingiyaatiif arjoomte.
Mummichi ministeera Kanaadaa Jastiin Trawudoo; Muslimoota Rohingiyaa kan duguuggaa sanyii waraanni mootummaa Miyanmaar irratti raawwata jiru jala lubbuu isaanii hambisuuf gara biyyoota oollaatti baqataniif, biyyi isaa deeggarsa doolara miliyoona 9.5 ol kan gumaachitu tahuu ibse.
Akkasumas hariiroo Kanaadaa fi Miyanmaar akka qoratuuf, Bulchaa Kutaa Ontaariyoo duraanii kan ture Bob Rayi mudameera.
Rayi ibsa guyyaa kaleessaa midiyaaleef kenneen ” Torbee dhufu keessa gara Miyanmaar imaluun dhimma kana qoradhee gabaasa mummicha ministeeratiif dhiheessuuf wadaa gala” jechuun dubbate.
Muummichi ministeeraa Jastiin Trawdo ibsa websaayti isaa irratti dabarseen
“Kanaadaan Dhimma Nageenyaa fi deeggarsa namummaa muslimoota Rohingiyaatiif ni yaaddoofti” jedhe.
“Bob Rayi immoo dhimma muslimoota Rohingiyaa kana furuuf mootummaa Kanaadaa gargaruu irratti abdii ciminaan ni hojjata jedhu qaba” jedhe.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii(UN) duguggaa sanyii waraanni Miyanmaarii fi hordoftoonni amantaa Budihaa muslimoota Rohingiyaa irratti raawwataniin, ji’a hagayyaa irra hanga ammatti namoonni 600,000 ol lubbuu isaanii hambisuuf gara Baangilaadiishiitti kan baqatan tahuu ibse.
Muummichi ministeera Baangilaadiish Abul Hasan Mahmuud Alii, gocha seeraan alaa waraanni mootummaa Miyanmaar fi hordoftoonni amantaa Budihaa ji’a hagayyaa keessa raawwataniin namoonni 3000 ol ajjeefamaniiru jedhe.
Odeeffannoo biraatiin ammoo Mootummaan Ameerikaa, deeggarsa Raayyaa ittisa mootummaa Miyanmaariif godhaa ture kan dhaabe fi akkasumas qoqqobbiin dinagdee akka irra kaa’amu murteesse.
Bara 2012 irraa kasee hanga ammaatti muslimoonni Rohingiyaa miliyoona tokko ol, duguuggaa sanyii waraanni mootummaa Miyanmaarii fi hordoftootni amantaa Budihaa isaan irratti raawwatan jalaa lubbuu isaanii hambisuuf gara biyyoota oollatti baqatanii jiru.
Namoota miliyoona tokko olii kana keessa immoo 600,0000 kan tahan duguuggaa sanyii waggaa kana ji’a hagayyaa keessa raawwatamuu jalqabeen, kanneen qe’ee isaanii irra buqqifaman tahu gabaasni Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii irraa argame ni addeessa.